हुर्रे ! आईपिएलबाट सन्दिप लामिछानेको लागि आयो अशिलेसम्मकै सबैभन्दा ठुलो खुसिको खबर – Nepal Trending
हुर्रे ! आईपिएलबाट सन्दिप लामिछानेको लागि आयो अशिलेसम्मकै सबैभन्दा ठुलो खुसिको खबर
On २५ आश्विन २०७६, शनिबार १९:४३
एजेन्सी : टिम इण्डियाका स्टार स्पिनर आर अश्विनले इण्डियन प्रिमियर लिग (आइपीएल) २०२० मा कुन टिमबाट खेल्ने कुरा निश्चित भएको छ । यसको फाइदा नेपाली लेग स्पिनर सन्दीप लामिछानेलाई हुने देखिन्छ ।
सन्दीपले दिल्ली क्यापिटल्सबाट खेल्दै आएका छन् । किंग्स इलाभेन पञ्जाब छोडेर दिल्लीबाट खेल्ने आँकलन चलिरहेका बेला पञ्जाब फ्रेन्चाइजका सह–मालिक नेस वाडियाले अश्विन आउने संस्करणमा पनि पञ्जाब टीमकै हिस्सा बन्ने स्पष्ट पारेका हुन् ।
भारतीय क्रिकेट टीममा अश्विनको भूमिका के रहेको छ भन्ने कुरा स्पष्ट देखिएको बताउँदै वाडियाले आश्विन कुशल खेलाडी भएको बताए । आगामी संस्करणमा समेत उनी पञ्जाबका तर्फबाट नै खेल्ने वाडियाले बताए । तर आउँदो संस्करण आइपीएल २०२० मा टीमको कप्तान हुने या नहुने भन्ने कुरा भने कोच अनिल कुम्बलेले गर्ने वाडियाले बताए ।
अनिल कुम्बले पञ्जाब टीमका नयाँ कोच हुन् । कर्टनी वाल्स बलिङ कोच छन् भने जोन्टी रोड्स फिल्डिङ र जर्ज बेली ब्याटिङ कोच रहेका छन् । सुनिल जोशी सहायक कोच हुने छन् ।
यसअघि अश्विन पञ्जाब छोडेर कुनै अरु टीमबाट खेल्ने हल्ला चलेको थियो । पञ्जाबले विगत १२ सिजनमा एउटा पनि संस्करणमा जित्न सकेको छैन ।
२०१४ मा भने यो टीम फाइनलमा पुगेको थियो । तर अन्तिममा कोलकत्तासँग हार बेहोरेको थियो । आइपिएल २०२० को लिलामी केही समयपछि हुने छ ।
रोनाल्डो चम्किएको खेलमा पोर्चुगल विजयी
सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो चम्किएको खेलमा पोर्चुगलले लक्जम्बर्गमाथि प्रभावशाली जित निकालेको छ । युरो कप छनोट अन्तर्गत शुक्रबार राति भएको खेलमा पोर्चुगलले लक्जम्बर्गलाई ३–० गोलले हरायो । घरेलु मैदानमा पोर्चुगललाई जिताउन रोनाल्डो, बर्नाडो सिल्भा र गोन्कालो गुइडेजले गोल गरे । १६औं मिनेटमा बर्नाडो सिल्भाले गोल गर्दै टोलीलाई सुरुआती अग्रता दिलाए ।
लक्जम्बर्गमाथि लगातार गोल गर्ने अवसर बनाएको पोर्चुगलले ६५औं मिनेटमा दोस्रो गोल गरेको थियो । रोनाल्डोले पोस्ट छेउबाट गोल गर्दै टोलीको अग्रता दोब्बर बनाए । राष्ट्रिय टोलीमा रोनाल्डोको यो ९४औं गोल हो । ८९औं मिनेटमा गोन्कालोले गोल गर्दै पोर्चुगलको जित सुनिश्चित पारेका थिए ।
यस जितसँगै समूह ‘बी’ मा रहेको पोर्चुगलले युरो कपमा छनोट सम्भावना बलियो बनाएको छ । पाँच खेलबाट ११ अंक बनाएको पोर्चुगल समूहको दोस्रो स्थानमा छ । एक खेल बढी खेलेको युक्रेन १६ अंकसहित तालिकाको शीर्ष स्थानमा छ ।
शुक्रबार रातिनै भएको खेलमा युक्रेनले लिथुनियालाई २–० गोलले पराजित गरेको छ । युक्रेनको जितमा दुवै गोल रुस्लान मालिनोभस्काईले गरे । रुस्लानले २९औं र ५८औं मिनेटमा गोल गरेका थिए । यस समूहमा सात अंक बनाएको सर्विया तेस्रो र चार अंक बनाएको लक्जम्बर्ग चौथो स्थानमा छ । एक अंकमा सिमित लिथुनिया अन्तिममा छ ।
यसैगरी समूह ‘ए’ को खेलमा इङ्ल्यान्डलाई चेक रिपब्लिकको नमिठो झट्का लागेको छ । घरेलु मैदानमा चेकले इङ्ल्यान्डलाई २–१ गोलले हरायो । युरो कप छनोट खेलमा इङ्ल्यान्ड १० बर्षपछि पहिलो पटक पराजित भएको हो । यस हारसँगै इङ्ल्यान्डको ४३ खेलसम्मको अपराजित यात्रामा पूर्णविराम लागेको छ । इङ्ल्यान्डले सुरुवाती अग्रता लिएरपनि हार खेपेको थियो । पाँचौ मिनेटमा कप्तान ह्यारी केनले पेनाल्टी मार्फत पहिलो गोल गरेका थिए ।
तर, इङ्ल्यान्डको अग्रता लामो समय टिकेन । नवौं मिनेटमा चेकमा ज्याकुव ब्राबेकले बराबरी गोल फर्काए । पहिलो हाफ बराबरीमा सकिएको खेलमा चेकले ८५औं मिनेटमा निर्णायक गोल गरेको थियो । चेकका लागि जेडेनेक ओन्ड्रासेकले निर्णायक गोल गरे ।
समूह ‘ए’ कै अर्को खेलमा मोन्टेनेग्रो र बुल्गेरियाले गोलरहित बराबरी खेल्दै अंक बाँडेका छन् । यस समूहमा पहिलो हार खेपे पनि इङ्ल्यान्ड शीर्ष स्थानमा यथावत छ । इङ्ल्यान्डले पाँच खेलबाट १२ अंक बनाएको छ । एक खेल बढी खेलेको चेक १२ अंक सहित दोस्रो स्थानमा छ । आठ अंक बनाएको कोसोभो तेस्रो, तीन तीन अंक बनाएको मोन्टेनेग्रो र बुल्गेरिया क्रमशः चौथो र पाँचौं स्थानमा छन् ।
पाकिस्तान एकदिवसीय टीमको कप्तानमा बाबर आजम नियुक्त
बुकीसँग उठबस गरेको भन्दै पाकिस्तानी क्रिकेटर उमर अकमललाई ३ वर्ष क्रिकेट खेल्न…
फुटबल गतिबिधी ठप्प भएको भन्दै फिफाले एन्फालाई दियो यति ठुलो आर्थिक सहयोग
डेभिड बेकह्याम भन्छन् : ‘ रोनाल्डोभन्दा मेसी उत्कृष्ट ‘
कोरोनाले विश्व खेलकुद ठप्प बन्दा तुर्कमेनिस्तानको फुटबल लिग भने पुनः सुरु
कोउटिन्हो बार्सिलोना नै फर्किने !
‘राजेश महानायक हो, धेरै चुरीफुरी नगर नानी’ भन्दै राजेन्द्र खड्गीले...
सरिता गिरीको सट्टामा सासंद बन्ने को हुन् यी महिला ?
सासंद पद चट भएपछि रिसले आगो हुदै सरिता गिरिले भनिन्...
सरिता गिरी सांसद पदबाट निष्कासित र पार्टीको साधारण सदस्यबाट पनि...
आज मंगलबार तोलामै ह्वात्तै घट्यो सुनको भाउ
सवारीमा जोरबिजोर हटाएर पुन: पास सिस्टम लागू गर्ने तयारी